ဒါဟာ privacy ကိုမူဝါဒက ("မူဝါဒ") ဘယ်လိုဝဘ်ဆိုဒ်အော်ပရေတာကိုဖော်ပြထားတယ် ("ကျဘျဆိုကျအော်ပရေတာ", "ကျနော်တို့", "ကျွန်တော်တို့" သို့မဟုတ် "ကျွန်ုပ်တို့၏") Collections, အဆိုပါသိသာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုကာကွယ်ပေးသည်နှင့်ကိုအသုံးပြုသည် ("ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များ") သငျသညျ ("အသုံးပြုသူကို", "သင်" သို့မဟုတ် "သင်၏") ယင်းအပေါ်ပေးစေခြင်းငှါ https://bestappsformobiles.com website နှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများမဆို (စုပေါင်းလျက်, "ကျဘျဆိုကျ" သို့မဟုတ် "န်ဆောင်မှုများ"). ဒါဟာအစသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. သင်တို့ဆီသို့မရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်မှုဖော်ပြထားတယ်ခြင်းနှင့်သင်မည်သို့ဤအချက်အလက်ရယူမွမ်းမံနိုင်ပါတယ်. ဤပေါ်လစီအတွက်ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မကုမ္ပဏီတွေရဲ့အလေ့အကျင့်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုလျှောက်ထားပါဘူး, သို့မဟုတ်ကျွန်တော် employ သို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲမတစ်ဦးချင်းစီမှ.
ကျနော်တို့ခံယူခြင်းနှင့်သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မည်သည့်အွန်လိုင်းပုံစံများကိုဖြည့်ပါအခါသင်သိလျက်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးမဆိုသတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်. သငျသညျအခြို့သောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးမပေးရှေးခယျြနိုငျ, ထိုအခါမူကားသင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အင်္ဂါရပ်တချို့၏အားသာချက်ယူနိုင်တော့မည်မပြုစေခြင်းငှါ. မဖြစ်မနေသောအရာကိုအချက်အလက်များအကြောင်းကိုမရေမရာနေသော users ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်ကြိုဆိုကြသည်.
သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများအလိုအလျှောက်သင့် browser ပို့ပေးကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မှတ်တမ်းတင်. ဒီ data ထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့ device ကိုရဲ့ IP လိပ်စာအဖြစ်အချက်အလက်များပါဝင်နိုင်, ဘရောက်ဇာအမျိုးအစားနှင့်ဗားရှင်း, operating system ကိုအမျိုးအစားနှင့်ဗားရှင်း, ဘာသာစကားရွေးချယ်မှုကိုသို့မဟုတ်သင်တို့သည်ငါတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ရောက် လာ. ရှေ့တော်၌ကိုယ်သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြသည်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ, သငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုသောငါတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်၏စာမကျြနှာ, သူတို့အစာမကျြနှာပျေါမှာသုံးစွဲအချိန်ကို, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေသတင်းအချက်အလက်များ, access ကိုကြိမ်နှင့်ရက်စွဲများ, နှင့်အခြားစာရင်းဇယား.
ငါတို့သည်သင်တို့အနေဖြင့်စုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသောစေခြင်းငှါ; ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို run ခြင်းနှင့်လည်ပတ်. non-ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းသာအလွဲသုံးစားမှုအလားအလာအမှုများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းစာရင်းအင်းသတင်းအချက်အလက်များတည်ထောင်ရန်ကိုအသုံးပြုသည်. ဤသည်စာရင်းအင်းအချက်အလက်များကိုစနစ်၏မဆိုအထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူကိုဖေါ်ထုတ်မယ်လို့ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်မဟုတ်ရင်စုပေါင်းမဟုတ်ပါဘူး.
အောက်ပါတို့မှတဦးတည်းသက်ဆိုင်လျှင်ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်ဆက်စပ်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များကို process စခွေငျးငှါ: (ကိုယ့်) သင်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဘို့မိမိတို့သဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးပြီ. သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲနဲ့ကန့်ကွက်သည်အထိအချို့ဥပဒေအောက်မှာကျနော်တို့သတင်းအချက်အလက်စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုစေခြင်းငှါသတိပြုပါ (ထွက်ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်), အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအောက်ပါဥပဒေရေးရာအခြေစိုက်စခန်း၏သဘောတူညီခကျြသို့မဟုတျအခွားအပေါ်မှီခိုအားထားစရာမလိုဘဲ. ဤ, သို့သော်, လျှောက်ထားမပါဘူး, ကိုယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ဥရောပ data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်အခါတိုင်း; (ii) အချက်အလက်များ၏ပြဌာန်းချက်သင်တို့နှင့်အတူရှိထားတဲ့သဘောတူညီချက်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် / သို့မဟုတ် သိ. ဆို Pre-သဘောတူထားသောတာဝန်ဝတ္တရားများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်; (ii) အပြောင်းအလဲနဲ့သင်ဘာသာရပ်ဖြစ်သောမှတရားဝင်တာဝန်နှင့်အတူလိုက်နာမှုများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်; (ဃ) အပြောင်းအလဲနဲ့အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်သို့မဟုတ်ကိုအပ်နှင်းအရာရှိတဦးကအခွင့်အာဏာများလေ့ကျင့်ခန်းထဲကယူသွားတတ်၏တဲ့အလုပ်တခုကိုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်; (v) အပြောင်းအလဲနဲ့ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်တတိယပါတီ လိုက်. တရားဝင်အကျိုးစီးပွားများ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်. ဘယ်ကိစ္စမဆို, ကျနော်တို့ကအပြောင်းအလဲနဲ့သက်ဆိုင်သောတိကျတဲ့ဥပဒေရေးရာအခြေခံရှင်းလင်းဖို့ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်, အထူးသဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုပြဌာန်းသို့မဟုတ်စာချုပ်စာတမ်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ရှိမရှိ, သို့မဟုတ်လိုအပ်သောတစ်ဦးလိုအပ်ချက်တစ်ခုစာချုပ်သို့ဝငျ.
သင့်တည်နေရာပေါ် မူတည်., ဒေတာလွှဲပြောင်းသင့်ကိုယ်ပိုင်ထက်အခြားတိုင်းပြည်များတွင်သင်၏အချက်အလက်များကိုလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်သိုလှောင်ပါဝင်နိုင်. သင့်အနေဖြင့်ဥရောပသမဂ္ဂအပြင်ဘက်သို့မဟုတ်အများပြည်သူနိုင်ငံတကာဥပဒေသို့မဟုတ်နှစ်ခုအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မည်သည့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းမှတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှသတင်းအချက်အလက်လွှဲပြောင်း၏ဥပဒေရေးရာအခြေခံအကြောင်းသင်ယူခွင့်ရှိသည်, ထိုကဲ့သို့သောကုလသမဂ္ဂအဖြစ်, နှင့်သင့်သတင်းအချက်အလက်များစောငျ့ရှောကျဖို့ကိုယူလုံခြုံရေးအစီအမံများနှင့်ပတ်သက်ပြီး. မဆိုဤကဲ့သို့သောလွှဲပြောင်းရာအရပ်ကိုကြာခဲ့လျှင်, သငျသညျဤစာရွက်စာတမ်းများ၏သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများကိုစစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်ပိုပြီးထွက်ရှာတွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်အပိုင်းအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည့်သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြု. ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမေးလျှောက်လို့ရပါတယ်.
သငျသညျကိုလုပ်ငန်းများ၌သင့်အချက်အလက်များကိုနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောအခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးစေခြင်းငှါ. အထူးသဖြင့်, သငျသညျအောကျပါလုပ်ဖို့ခွင့်ရှိသည်: (ကိုယ့်) သင်ယခင်ကသတင်းအချက်အလက်တွေရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ရန်သင့်ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီဘယ်မှာသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရုတ်သိမ်းရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်; (ii) အဆိုပါအပြောင်းအလဲနဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်ထက်အခြားတစ်ဦးဥပဒေရေးရာအခြေခံပေါ်မှာထွက်သယ်ဆောင်လျှင်သင်သည်သင်၏အချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်; (iii) သတင်းအချက်အလက်ကိုလုပ်ဆောင်နေပါသည်လျှင်သင်လေ့လာသင်ယူရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, အဆိုပါအပြောင်းအလဲနဲ့အချို့ရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်. ထုတ်ဖော်ရရှိရန်နှင့်သတင်းအချက်အလက်လျှက်အပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ဦးမိတ္တူရရှိရန်; (ဃ) သင်သည်သင်၏အချက်အလက်များ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုအတည်ပြုရန်နှင့် updated သို့မဟုတ်တညျ့ခံရဖို့တောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်; (v) သငျသညျပိုင်ခွင့်ရှိသည်, အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်, သတင်းအချက်အလက်တွေရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ကန့်သတ်ရန်, ဘယ်ကိစ္စမှာလဲ, ကျနော်တို့ကသိုလှောင်ခြင်းထက်အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အဘို့သင့်သတင်းအချက်အလက်စီမံဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်; (ကျွန်တော်တို့) သငျသညျပိုင်ခွင့်ရှိသည်, အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်, ကျွန်တော်တို့ဆီကသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များ၏ဖျက်ရရှိရန်; (VII) သငျသညျကိုစနစ်တကျအတွက်သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုလက်ခံရရှိရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, အများအားအသုံးနှင့်အစက်ဖတ်လို့ရအောင်ပုံစံနှင့်, နည်းပညာပိုင်းအဖြစ်နိုင်လျှင်, ဒါကြောင့်မည်သည့်အတားအဆီးမရှိဘဲအချင်းချင်း controller ကိုမှကူးစက်ကြ. ဤသည်ပြဋ္ဌာန်းချက်သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအလိုအလျောက်အားဖွငျ့လုပ်ငန်းများ၌နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့သင့်ရဲ့သဘောတူညီခကျြအပျေါအခွခေံကြောင်းကြောင်းသက်ဆိုင်သည်, သငျသညျတို့ကို Pre-သဘောတူထားသောတာဝန်ဝတ္တရားများသို့မဟုတ်အပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သောစာချုပ်အပေါ်.
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များအများပြည်သူအကျိုးစီးပွားများအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာ, ကိုအပ်နှင်းတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကအခွင့်အာဏာများလေ့ကျင့်ခန်းဒါမှမဟုတ်ကိုကို လိုက်. တရားဝင်အကျိုးစီးပွား၏ရည်ရွယ်ချက်, သင်ကန့်ကွက်တရားမျှတရန်သင့်အထူးသဖြင့်အခြေအနေနှင့်ဆက်စပ်သောမြေပြင်ပေးခွငျးအားဖွငျ့ထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲနဲ့ကန့်ကွက်ခြင်းငှါ. သငျသညျကွောငျးသိရရမယ်, သို့သော်, သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များတိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လုပ်ငန်းများ၌ရပါမည်, သင်သည်မည်သည့်မျှတမှုပေးခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မကြောင်းအပြောင်းအလဲနဲ့ကန့်ကွက်နိုင်ပါတယ်. သင်ယူရန်, ကျနော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များ processing ရှိမရှိ, သငျသညျဤစာရွက်စာတမ်းများ၏သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများကိုရည်ညွှန်းခြင်းငှါ.
ကျနော်တို့သိလျက်နှစ်အောက်ကလေးများအနေဖြင့်မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များစုဆောင်းကြဘူး 13. သင်တို့တွင်တနှစ်အောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင် 13, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များတင်ပြကြဘူးကျေးဇူးပြုပြီး. ကျနော်တို့ကသူတို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များသည်ဘယ်တော့မှသူတို့သားသမီးရဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုစောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ကလေးတွေညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်ဤမူဝါဒပြဋ္ဌာန်းရန်ကူညီပေးဖို့မိဘများနှင့်ဥပဒေရေးရာအုပ်ထိန်းသူများအားပေး. သင်တို့တွင်တနှစ်အောက်ကြောင့်ကလေးတစ်ဦးယုံကြည်ဖို့အကြောင်းပြချက်ရှိပါက 13 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ငါတို့အားကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များပေးထား, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.
ကျနော်တို့အွန်လိုင်းကြော်ငြာများပြသနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်သို့မဟုတ်အချို့ကြော်ငြာရှင်များနှင့်အတူအွန်လိုင်းစစ်တမ်းများနှင့်ပရိုမိုးရှင်းမှတဆင့်စုဆောင်းသောငါတို့ဖောက်သည်အကြောင်းကိုစုစည်းနှင့် Non-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေနိုင်ပါသည်. ကျနော်တို့ကြော်ငြာရှင်များနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီဖောက်သည်အကြောင်းကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်များဝေမျှကြဘူး. အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်, ကျနော်တို့ရည်ရွယ်ပရိသတ်ကိုမှလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကြော်ငြာကယ်နှုတ်တော်မူရန်ဤစုစည်းနှင့် Non-ဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်သုံးနိုင်ပါသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်သောသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ထားကြသည်မဟုတ်သောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှလင့်များပါရှိသည်. ကျနော်တို့က privacy ကိုထိုကဲ့သို့သောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏အလေ့အကျင့်သို့မဟုတ်တတိယ-ပါတီများအတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ် ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ. သင်တို့သည်ငါတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ထားခဲ့ပါနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းစေခြင်းငှါတိုင်းက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုဖတ်သောအခါကျနော်တို့သတိထားမိဖြစ်သငျသညျအားပေး.
ကျနော်တို့ကထိန်းချုပ်ထားအတွက်ကွန်ပျူတာဆာဗာများပေါ်တွင်သင်သည်သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှု, လုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်, ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်မှကာကွယ်, အသုံး, သို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်. ကျနော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ထိန်းသိမ်းရန်, စက်မှုလက်မှု, ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်တစ်ခုအားထုတ်မှုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကာအကွယ်, အသုံး, ပွောငျးလှဲခွငျး, နှင့်၎င်း၏ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ၏ထုတ်ဖော်. သို့သျောလညျး, အဘယ်သူမျှမအချက်အလက်များကိုအင်တာနက်မှတဆင့်ထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုအာမခံနိုင်ပါတယ်. ထိုကွောငျ့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်ပေးဖို့ကွိုးစားနေစဉ်, သငျသညျအသိအမှတ်ပြု (ကိုယ့်) ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုထက်ကျော်လွန်နေသောအင်တာနက်လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုကန့်သတ်ရှိပါတယ်; (ii) လုံခြုံရေး, သမာဓိရှိ, သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အကြားလဲလှယ်ဆိုအပေါင်းတို့နှင့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်များ၏ privacy ကိုအာမခံမရနိုငျ; နှင့် (iii) မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များနှင့်ဒေတာများတဲ့ Third-party အားဖြင့်အကူးအပြောင်းအတွက်ကြည့်ရှုအားပေးသို့မဟုတ်နှောင့်အယှက်စေခြင်းငှါ, အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရှိနေသော်လည်း.
ထိုအဖြစ်အပျက်အတွက်ကျနော်တို့ကဝက်ဘ်ဆိုက်၏လုံခြုံရေးစိတ်မချရထားပြီးသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များပြင်ပလှုပ်ရှားမှု၏ရလဒ်အဖြစ်သက်ဆိုင်တဲ့ Third-ပါတီများမှထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးကိုသတိထားပါဖြစ်လာ, အပါအဝင်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မရ, လုံခြုံရေးတိုက်ခိုက်မှုများသို့မဟုတ်လိမ်လည်မှု, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သင့်လျော်သောဆောင်ရွက်မှုများကိုယူပိုင်ခွင့်ကျနော်တို့ကြိုတင်ယူထား, အပါအဝင်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မရ, စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်အစီရင်ခံ, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သတိပေးချက်နှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအာဏာပိုင်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး. ဒေတာဖောက်ဖျက်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, ကျနော်တို့အသုံးပြုသူမှအန္တရာယ်တစ်ခုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွန့်စားမှုရှိကွောငျးယုံကြည်လျှင်အသိပေးစာမဟုတ်ရင်ပညတ်တရားအားဖြင့်လိုအပ်သောဖောက်ဖျက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်သို့မဟုတ်လျှင်ဘေးဒဏ်သင့်တဦးချင်းစီကိုအကြောင်းကြားဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အားထုတ်မှုစေမည်. ကြှနျုပျတို့ပွုတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှအသိပေးစာ post ပါလိမ့်မယ်.
အချိန်မရွေးကျဘျဆိုကျသို့မဟုတ်န်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်းဒီကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာမူဝါဒပြုပြင်မွမ်းမံဖို့လက်ျာကျနော်တို့ကြိုတင်ယူထား, ယင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာဤပေါ်လစီတစ်ခု updated version ကို၏ပို့စ်အပေါ်သို့ထိရောက်သော. ကြှနျုပျတို့ပွုသောအခါအကြှနျုပျတို့သညျဤစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေရှိ updated နေ့စွဲပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်. မဆိုဤကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲများပြီးနောက်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဆက်လက်အသုံးပြုမှုကိုဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေရန်သင့်သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကိုဖွဲ့စည်းရကြလိမ့်မည်.
သင်တို့ရှိသမျှသည်၎င်း၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုသင်ဤပေါ်လစီကိုဖတ်ပြီးကြပါပြီအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သဘောတူ. ယင်းဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ယင်း၏န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဤပေါ်လစီအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူ. သင်ဤပေါ်လစီ၏စည်းကမ်းချက်များလိုက်နာရန်သဘောတူမထားဘူးဆိုရင်, သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဝင်ရောက်ဖို့အခွင့်မရှိပါ.
သင်ဤပေါ်လစီနှင့် ပတ်သက်. မဆိုမေးခွန်းများရှိပါက, ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ. [email protected]
ဤသည်စာရွက်စာတမ်းမေလနောက်ဆုံး update လုပ်ခဲ့သည် 24, 2018